I-Semalt ichaza indlela yokukhusela iSayithi lakho ukusuka ekugqibeleni
Intanethi ngumthombo omkhulu onamandla angenamkhawulo. Ngenxa yoko, i-intanethiiqonga libonelela ngeendlela ezininzi apho iimveliso kunye nemibutho iyakwazi ukudibana nabaphulaphuli kunye nendawo engenakulinganiselwa kuyo.Abanomashishini abaninzi bathatha indlela ye-e-commerce yokusekela iiwebhusayithi zabo kunye namandla kumaphulo abo okuthengisa. Kukho kwakhonaezininzi iiblogi ezinemibhobho ephumelelayo kwi-intanethi - long term care insurance california. Xa beqhuba i-e-commerce sites, ukhuseleko lwabo luyinto enye phakathi kwamanye amaninzikufuneka uqikelele.
Xa senza iiwebhsayithi, sigxininisa ukuhanjiswa kweenkonzo, ukwaneliseka kwabathengi, kunyeisibheno seUX. Ubuninzi beendlela zokuthengisa eziza kusetyenziswa zihlala ziquka iindlela ze-Search Engine Optimization (SEO) ezifana namazwi angundoqoukukhangela kunye nokuxhunyaniswa. I-potential hacker eneliwebhusayithi ayiyiyo ingcamango ewela ingqondo yabantu abaninzi.
Xa ufunda indlela yokuthintela ukuhlaselwa ngamandla, kubalulekile ukufunda ezinyeubuchule obunokuthintela ezinye iindawo eziqhelekileyo. Nik Chaykovskiy, umphathi weMatriki oPhumeleleyo weNtengiso iSemalt IiNkonzo zeDivithali, izipho kwiinkcukacha zakho ezikhoyo kunye nezindlela zokuziphepha:
Olu hlaselo lungabandakanya imilayezo yephutha kunye neefom zokufowunelwa kwi-intanethi. Xa wenza iwebhusayithi,Kubalulekile ukwenza amagama angenanto okanye angenanto. Le nto inokukhanyela i-hacker ngolwazi oluxabisekileyo, oluya kulusebenzisangokuzenzekelayo ukuhlaselwa kwabo. Kwamanye amaxesha, imilayezo yephutha imele ibe ngamazwi anomsebenzisi. Ezinye iimpazamo zinokunika abagculi ingcinga kwiukutshatyalaliswa kwenkqubo..
Lo mbandela wenza ukuba i-akhawunti ikhuphe emva kokuzama iinzame ezininzi zokungena ngemvume.Ukuvumela iilingo ezincinci zinika i-akhawunti yomsebenzisi wexhoba ezinye iinzuzo zokukhusela kwi-hacker. Ukusebenzisa iphasiwedi ekhuselekileyo ingabaumlinganiselo obalulekileyo abantu abangawusebenzisa ukuphucula ukhuseleko lwewebhusayithi yabo. Iikhowudi zeCaptcha zinokukhusela ukungena okuzenzekelayoinokuvela kwi-bots. Baqinisekisa kwakhona ukuba ngumntu wangempela usebenzisa isiza, kungekhona i-robot.
Kubalulekile ukusebenzisa ipaswedi ekhuselekileyo ngokukodwa kwipaneli yomphathi wewebhusayithi yakho.Iphasiwedi ekhuselekileyo inokuthintela iwebhusayithi yakho ekuhlaseleni okulula. Iphasiwedi efana ne-12345 ayikhuselekanga kwaye ingakhokelela ekuhlaselweni kwemvelo.Kubalulekile ukusebenzisa i-password generators ukuba ifike ngegama elidlulileyo. Kubalulekile ukuqhubeka utshintsha iphasiwedi yakho. Wenainokuphucula ukhuseleko lwewebhusayithi yakho ngale ndlela.
Zininzi iindlela iindlela abahlaseli bafumana ngayo indlela eya kwiwebhsayithi. Abanye beiindlela ezona ziqhelekileyo apho abahlaseli badibanisa iwebhsayithi ziquka i-SQL Injection kunye ne-Cross Site Scripting. Kubalulekileukuphucula ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye neenkonzo zabathengi bakho ngokusebenzisa iindlela zokwakha ezikhoyo kwisikhokelo esingentla.Uyakwazi ukuphucula indlela i-website isebenze ngayo kunye nokuthintela ithuba lokuba i-hacker iphumelele ekuhlaseleni iwebhusayithi.Ukukhuselwa kwe-intanethi ye-website yakho kusezandleni zomlawuli. Hackers nayo ingaphanga ulwazi olubalulekileyo lwamakhasimendeezifana namakhadi ekwereta. Kubalulekile ukuqwalasela le ngongoma xa ukhetha iiwebhusayithi.